Wararka Maanta: Arbaco, Nov 28, 2012-Dadweynaha Somaliland oo safaf dhaa-dheer ugu jira Goobaha Codadka laga bixinayo iyo Madaxweynaha oo Codkiisii Dhiibtay
Sodomeeyo goobood oo ku yaalla magaaladda Hargeysa xaafadaheedda kala duwan oo aanu kormeer ku samaynay, ayey gudoomiyeyaasha goobaha codka laga bixinayo iyo wakiiladda ururadda iyo xisbiyada u joogay goobaha codeyntu noo sheegeen inay si wanaagsan hawshoodu u socoto, isla markaana aanay wali wax dhibaato ah kala kulmin, inkastoo goobaha qaarkood ay jireen xisbiyo aan usoo diran muraaqibiin goob joog u noqon lahaa goobaha qaarkood, iyadoo toddobada ururba laga rabo hal qof oo goobjoog u ahaada qaabka codbixintu uga socoto.
Sidoo kale, waxa jiray Meelaha qaarkood oo ay ka taagnaayeen khilaaf u dhexeeyey dadka codka dhiibanaya iyo Askarta ilaaladda, iyagoo dadkaasi ka cabanayey inay askartu ku yartahay taasina ay keenayso inay dadku xoog ku jiidhaan ka dibna uu nidaamka safka loogu jiray lumayo, isla marakana buuq iyo is riix riix ka imanayo.
Dadweynaha intoodda badan waxay safka galeen habeenimaddii, halka qaarkood ay yimaadeen markii ay saaladda subax soo tukadeen, sidoo kale intii aanu kormeerka ku jirnay goobaha codbixinta waxa jiray sanaaduuq goobaha qaarkood ku soo qaldamay oo iska xidhnaa wax shaqo ahina aanay ka socon, balse ay askartu ilaalinaysay, halka qaarkoodna ay goobnihii la dhigi lahaa ka soo lumeen, isla markaana soo raaceen sanaduuq kale.
Illaa hadda wax rabshad ah kama dhicin guud ahaan magaaladda Hargeysa marka laga reebo woxoogaa dhalinyaro ah oo ay askartu isku dhaceen oo dhibaatooyin yaryar loo gaystay.
Madaxeynaha Somaliland Dr:Axmed Maxamed Maxamuud Siillaanyo iyo qaar ka tirsan golihiisa wasiiradda ayaa isna saaka codkiisa ka dhiibtay xarunta hay’ada shaqaalaha, waxaanu dadweynaha ugu baaqay inay nabad iyo deganaasho ku codeeyaan, halka gudoomiyaha muxaafadka ah ee kulmiye iyo gudoomiyeyaasha qaarkoodna isla goobtan ka codeeyaan.
Guud ahaan gobolada Somaliland ayaa si weyn looga dareeramay doorashooyinka golaha deegaanka si ay u soo doortaan xildhibaanadii golaha deeganadoodda, waxaase la sheegayaa inay gobolada qaar ay rabshado ka dhaceen waxyeelo ka soo gaadhay dadweynihii codaynayey.
Si kastaba ha ahaaatee, doorashada ayaa ah mid xasaasi ah oo ay ku tartamayaan toddoba urur, kuwaas oo laga rabo inay saddex xisbi iskugu soo hadhaan, taas oo walaac badan ku haysta gudoomiyeyaasha ururada, isagoo mid waliba farta wadnaha ku haya, waxaana guud ahaan dalka oo dhan ka sharaxan 2,653 musharax iyo 7 urur, waxaana laga rabaa inay soo baxaan saddex xisbi Qaran iyo 379 xildhibaan oo la wareegi doona maamulka dawladaha hoose ee dalka.
dhinaca kale, waxa iyaguna kormeerkoodii watay goobjoogayaal caalami ah oo u yimid inay ogaadaan qaabka ay doorashadu u dhacayso, waxa kale oo iyana ka mid ah kormeerayaasha qaar ka mid ah ururada bulshadda ee ka jira magaaladda Muqdisho iyo Garoowe oo u yimid inay goobjoogayaal ka noqdaan doorashadda, waana markii ugu horaysay ee doorashooyinka Somaliland ay yimaadaan goobjoogayaal Soomaaliya ka socda.